Abavelisi beengubo ezinde zemikhono emide - abaThengi beShawti yeShawki ende kunye neFemu-Icandelo 2
Uninzi lwePolyester Cotton Classic Sleeve Slim Fit ukulinda iyunifomu ye-CW195C8400H
I-Brand CHECKEDOUT Item Code CW195C8400H ubukhulu S-3XL amagama aphumeleleyo iyunifomu, ukubuk 'iindwendwe, ilokhwe enemikhono emide, ihempe yokulinda Iindwangu 65/35 zesipili / ikotoni Xinjiang Aksu umtya omde omde, akukho-pilisi, akukho kuncipha, akukho zifo zenyama, inkonzo yeenkonzo iphindwe kabini njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ...
Isinxibo sePotton yeklasikhi yesiqingatha semikhono I-Slim Fit yokulinda iyunifomu yeCM1102Z104000T4
I-Brand CHECKEDOUT Item Code CM1102Z104000T4 ubungakanani S-3XL Amagama aphambili okubethelelwa iyunifom, indawo yokungenisa izihambi, ihempe yesiqingatha semikhono, ihempe yokulinda Iindwangu ezingama-60/40 poly / ikotoni GSM 143g Intambo yokuthunga yePolyester ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukuxhathisa okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokumelana nobushushu, umsonto we-polyester yi-corrosion-ukumelana ...
Uninzi lwePolyester Cotton Classic Sleeve Slim Fit ukulinda iyunifomu ye-CM195C8400H
I-Brand CHECKEDOUT Item Code CM195C8400H ubukhulu S-3XL Amagama aphambili wokulinda, iyunifomu yengubo, ishati enemikhono emide, ihempe yokulinda Indwangu 65/35 isininzi / ikotoni Xinjiang Aksu umtya omde omde, akukho-pilisi, akukho kuncipha, akukho zifo zenyama, inkonzo yenkonzo iphindwe kabini njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, abr elungileyo ...
Uninzi lwePolyester Cotton Classic Sleeve Slim Fit ukulinda iyunifomu ye-CM1056C155000H
I-Brand CHECKEDOUT Item Code CM1056C155000H Ubukhulu be-S-3XL Amagama aphambili okulinganisa, iyunifomu yengubo ende, ihempe emide, ihempe yokulinda Indwangu 100 yePOLU Ukuthunga Intambo yePolyester ikwabizwa ngokuba ngumtya wamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukumelana okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester ayihambelani ne-corrosion, ukumelana ne ...
I-GRAY Polyester Cotton Classic Long Sleeve Slim Fit ukulinda iyunifomu ye-CM185C5901HH
I-Brand CHECKEDOUT Item Code CM185C5901H ubukhulu S-3XL Amagama aphambili wokulinda, iyunifom yondwendwe, ihempe yengubo emide Fabric 65/35 poly / ukotoni Xinjiang Aksu omde omde omqhaphu, akukho-pilisi, akukho-shrink, akukho-carcinogens, ubomi benkonzo li-2. njengekhephu eliqhelekileyo labapheki. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, i-abrasion elungileyo ...
Uninzi lwePolyester Cotton Classic Sleeve Slim Fit yokulinda iyunifomu yeCM193C4100T2
I-Brand CHECKEDOUT Item Code CM193C4100T2 ubukhulu S-3XL Amagama aphambili wokulinda, iyunifomu yondwendwe, ihempe emide, ihembe lokulinda Indwangu 65/35 isininzi / ikotoni Xinjiang Aksu umtya omde wokuthambisa, akukho pilisi, akukho kuncipha, akukho zifo zenyama, inkonzo yeenkonzo iphindwe kabini njengengubo eqhelekileyo yokupheka. Ukuthunga I-Thread Polyester intambo ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphezulu, ukulunga ...